राजनीति – Page 361 – Halkaro
फुजेल हत्याकाण्डः जाहेरवाला नुरप्रसाद फेला नपरेपछि पिपलको बोटमा म्याद टाँसियो
चितवन निकुञ्जमा पोथी बाघ मृत फेला
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डः म्याद थप्दा थप्दै ४३ करोड लागत वृद्धि हुने अनुमान
तिमीसँगको युनिट चितवनमा
दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सडकमा डिभाइडर
नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्तालार्इ अाग्रह
सिल्क रोडको निर्माणमा युक्रेनको चासो
प्रकाशित मिति : २०७३, २७ आश्विन बिहीबार
किभ, २५ असोज । चीनले निर्माण गर्न लागेको एक ठूलो आयोजना सिल्क रोडको निर्माणमा युक्रेनले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने इच्छा देखाएको छ । युरोप, अफ्रिका र एसियाका दर्जनौँ देशलाई जोड्ने गरी चीनले तयार गरेको महत्वकांक्षी योजना सिल्करोड विस्तारका लागि युक्रेनले पनि सहयोग र सम्लग्नताबारेमा चासो देखाएको छ । चीनको यो सिल्करोड आयोजनामा युक्रेन पनि सम्लग्न […]
प्रकाशित मिति : २०७३, २७ आश्विन बिहीबार October 14, 2016
गाईघाट, असोज २७ । उदयपुर जिल्लाको बेल्टार बसाहा नगरपालिकाअन्तर्गत बेल्टारबजार गएराति स्थानीय बासिन्दाहरू बीच झडप हुँदा तनावग्रस्त बनेको छ । उक्त झडप पछि भीडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले दर्जनौँ राउन्ड अश्रुग्याससमेत प्रयोग गरेको छ । बेल्टार–२ सिरबानी बस्ने राजेन्द्र कटुवालकी श्रीमती भीमकुमारी कटुवालको हत्या भएको प्रकरणमा माइती पक्ष र घर पक्षका मानिसहरूबीच झडप भएको हो । […]
चीनका राष्ट्रपति कम्बोडियामा
न्होमपेन्ह, असोज २७ । चीनका राष्ट्रपति सि जिङ्गपिङ औपचारिक भ्रमणका लागि बिहीबार कम्बोडिया पुगेका छन् । परम्परागत मित्रवत सम्वन्धलाई निरन्तरता दिँदै आपसी सहयोग अभिवृद्धिका लागि सदासयता देखाउन र दुई देशबीचको रणनीतिक सहकार्यका लागि उहाँले कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको बताइएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा सिको राष्ट्रपति भएयता यो नै पहिलो भ्रमण हो । उनले यसअघि उपराष्ट्रपतिको […]
ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीनका राष्ट्रपति निस्किए
बेइजिङ्ग, २७ असोज । भारतको गोवामा आयोजना हुन लागेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ग बिहीबार बिहान हिँडेका छन् । शिखर सम्मेलन शुरु हुनुपूर्व उनले कम्बोडिया र बङ्गलादेशको औपचारिक भ्रमण गर्ने छन् । शिखर सम्मेलन स्थलतर्फ जाने बाटोमा पर्ने चीनका मित्र राष्ट्रप्रमुखहरुः कम्बोडियाका नरेश नरोडम सिंहामोनि र बङ्गलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले चिनियाँ […]
लाप्राकको नमुना बस्तीको प्रधानमन्त्रीद्वारा शिलान्यास
गोरखा, असोज २१ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को लगानीमा निर्माण हुने लाप्राकको एकीकृत नमूना बस्तीको शिलान्यास गरेका छन् । शुक्रबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट लाप्राक पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले नमूना बस्ती शिलान्यास गरेका हुन् । नमुना बस्तीको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो एकीकृत बस्ती मात्रै होइन, नमूना बस्ती पनि […]
दसैंपछि संविधान संशोधन प्रस्तावः मन्त्री केसी
काठमाडौं, असोज २१ । सहरी विकासमन्त्री अर्जुनरसिंह केसीले दसैंपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरुबीच छलफल भइरहेको भन्दै दसैँ पछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने बताए । उनले सबै दलहरू संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सकारात्मक रहेको उनले दाबी गरे । […]
बेइमानी गरे प्रचण्ड र देउवा पनि सिद्धिन्छनः फोरम नेता सुवेदी
काठमाडौँ, असोज २० । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता दुर्गामणि सुवेदीले संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बेइमानी गरे उनीहरु सिद्धिने चेतावनी दिएका छन् । दुई महिनाअघि नै भइसकेको सहमति लागू गर्न ढिलाई भएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै फोरम नेपालका नेता सुवेदीले सहमतिबाट पछि हटेर धोका दिन खोजे प्रचण्ड र देउवा पनि केपी […]
नेपाली सेनाको १ नं. बाहिनी नजिकै शंकास्पद बस्तु
काठमाडौँ, असोज २० । दशैंको मुखैमा राजधानीको उत्तरस्थित नेपाली सेनाको बाहिनी नं. १ रहेको स्थानबाट २०० मिटर पर व्यस्त बजारमा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ । बालाजु बाईपासबाट नेपालटार जाने सडकमा उक्त शंकास्पद बस्तु फेला परेको हो । शंकास्पद वस्तु फेला परेको स्थानबाट १०० मिटर नजिकै तरुण माध्यामिक विद्यालय र राजधानी कलेज छन् । उक्त बस्तु […]
चीनका राजदुत हु चुन ताइको नेपाल बसार्इ कति सफल कति असफल ?
काठमाडौँ, असोज २० । नेपालका लागि चीनियाँ राजदूत हु–चुन ताइले ३ वर्ष ८ महिनाको कार्यकाल सकरे स्वदेश फर्कँदै छन् । उनी नेपाल रहँदा नेपालले ठूलो विपत्तीको सामाना गर्यो । उनी नेपालमा राजदुतको रूपमा रहँदा नेपालमा विनासकारी भूकम्प गयो । भूकम्पका बेला चीनको सहयोग नेपाललार्इ अतुलनीय रह्यो । उनले यसमा ठूलो भूमिका खेले । त्यस लगत्तै […]